ရသစုံပေးစွမ်းနိုင်သည့် Classic City Tea Saloon – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
146823 Views so far
ရသစုံပေးစွမ်းနိုင်သည့် Classic City Tea Saloon
August 31, 2018 နေ့
Summary: အဆောက်အဦပိုင်းအနေနဲ့ မန္တလေးမြို့ ၃၅လမ်း ၆၁လမ်းထောင့်မှာ ဖွင့်လှစ် Classic City Tea Saloon ကို နိုဗာတက်မှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးထားပါတယ်။ လူ ၂၀ဝကျော်တပြိုင်တည်းစားသောက်နိုင်ပီး၊ ဆိုင်ထိုင်ရတာ တခါနဲ့တခါ တစ်နေရာနဲ့တနေရာ ရသမတူသော အတွေ့အကြုံ..၊ တချိန်က မန္တလေးကရပ်ကွက်လေးတစ်ခု.. အရင်မန္တလေး ဈေးချိုဝန်းကျင်က အဆောက်အဦတွေကို ရောက်သွားမည့် ပုံစံ… အဆောက်အဦ ရလုံးကို space within the space concept နဲ့ နေရာချထားပီး ၊ လိုက်ဖက်အောင် interior outdoor ဆက်စပ်ရေးဆွဲပေးထားပါတယ်။ ပထမ ဝင်ဝင်လာချင်း Spanish colonial style မျက်နှာစာနဲ့ အပေါ်အောက် terrace cafeteria area လေးတွေပေးထားပါတယ်။ အထဲကိုရောက်ရင် အဲကွန်းပေးထားတဲ့အခန်းကို အရင် ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာ ဈေးချိုတော်ရဲ့ ဗိသုကာဟန်ကိုယူထားပါတယ်။ ဘေးမှာတော့ booth area, cashierအဆာင် တွေကို သီးသန့်လျှောက်လမ်း မြို့ဟောင်း အရသာ လမ်းကြားလေးတွေ နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ သစ်ပင်တွေရှိတော့ သစ်ပင်ရိပ်မှာနားနေတတ်တဲ့ ရှေးက မန္တလေးကလမ်းဘေးလက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးတွေလို semi outdoor ပုံစံ ထိုင်ပီး စားသောက်နိုင်အောင်ပေးထားပါတယ်။ ဆိုက်မှာရှိပီးသား သစ်ပင်တွေကို ဒီဇိုင်းထဲမှာစဉ်းစားထားပီး အညာမြေ သစ်ပင်ရိပ်မှာ လက်ဖက်ရည်သောက်ရတဲ့ အရသာကို ပေးထားပါတယ်။ Kitchen အဆောင် က ၂ထပ်ဖြစ်ပီး သူ့ကိုလည်းဧည့်သည်တွေဘက်ကနေကြည့်ရင် colonial art deco အငွေ့အသက် အဆောက်အဦမျက်နှာစာတစ်ခုလို မြင်ရစေမှာပါ။ အပေါ်ထပ်ကလည်း သီးသန့် အဲကွန်းခန်းတစ်ခုထပ်ပေးထားပါတယ်။ ရှေ့မျက်နှာစာကလွဲလို့ နောက်က အဆောင် တွေအားလုံးကို သဘာဝအလင်းပေးနိုင်တဲ့ အမိုးနဲ့ ခပ်မြင့်မြင့်မိုးပေးထားပီး ဆိုင်ကို မျက်နှာစာ ၃ခုကဝင်လာနိုင်အောင် လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်။
environment ကအဖြူနဲ့အနက်ကိုပဲ ရွေးခဲ့တယ်။ Branding လုပ်တော့တွေ့ရတဲ့အခါ ဆိုင်က များလာတဲ့ စားသောက်သူရောင်စုံ လူတွေကြားထဲမှာ အလှမပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီး ဆိုင်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပါ။ဝန်ထမ်းတွေကို ကာကီရောင် နဲ့ အနက်ကို ဝတ်ဆင်စေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအတွက်Novatek Design ကျောင်းက crafter / လက်မှု တော်တဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေကို အိုင်ဒီယာညှိပီး အပ်ရ လုပ်ရတာပေါ့၊ တချို့တွေလည်းရုံးမှကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်။ဝါးကြိမ်ပန်းပုကြေးမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဆိုင်တွေလိုက်ရှာပေးရပါတယ်။ မင်းသားတွေရှင်ပြုပွဲတွေက ရွှေချည်ထိုးပုဆိုးတွေကို ဘောင်ခေတ်ပြဖို့ ၁လ ကြိုမှာခဲ့ရတယ်။ အဝတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အရုပ်ဆို အဆင်ကအစ စစ်ပီးခောတ်ပုံစံလေးဖြစ်အောင် သုံးနေကျမဟုတ်တဲ့ ရွှေချည်းထိုးပန်း ကို အဝတ်နဲ့ stitchလုပ်ပီး ထားတာကိုမှာယူခဲ့တယ်။ ဝါးနဲ့လုပ်လုပ် မြေနဲ့လုပ်လုပ် လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေကိုမြင်ရင် ဈေးအနည်းအများထက် နိုင်ငံခြားသားကဆိုင်ကိုလာထိုင်ရင်တောင် မြန်မာပြည်အငွေ့အသက်လေးကို တမျိုးလေးပြချင်တာနဲ့သုံးနေကျအရောင်ကိုပြောင်းပစ်တာ၊ presentation ကို ပြောင်းတာမျိုးကြိုးစားထားပါတယ်။
ကိုယ်ကနောက်ဆုံးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်လေးမလှမှာ လူတွေမကြိုက်မှာကိုတော်တော်လေးစိုးရိမ်မ်ိတယ်။ ပါဝင်တဲ့ management, construction အဖွဲ့တွေများတော့ လွဲချော်သွားမှာ စိတ်ပူတယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ခါနီး၁လကျော်လောက်မှာ အင်ဂျင်နီယာတွေဆောက်နေတဲ့အခါထုတ်ထားတဲ့ Design အတိုင်းရအောင် ညှိပေးနေရင်းနဲ့ တဖက်က ဒီဘုစုခရုတွေလိုက်စုနေရတာပေါ့။ ပရိဘောဂ decoration တွေအထိ ဒီဇိုင်းနာဖန်တီးထားတဲ့အပေါ်မှာ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အပိုအလို မရှိသလောက် တော်တော်လေးထိန်းသိမ်းပီး ပိုင်ရှင်ဖက်ကဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုလို လုပ်ခွင့်ရလို့ Novatek Design + Training Services အနေနဲ့ classic city Tea saloon ပိုင်ရှင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Festive & Fun- – ပွဲလန်းသဘင်တစ်ခုလိုရောက်လာသူကို စိတ်တက်ကြွစေချင်တယ်။
Floral- ပန်း(ဖော်ပြချက်တွေတိုင်းမှာ ပန်းပွင့်ပန်းအရောင်တွေပါချင်တယ်)
Faces- မန္တလေးရှေးရှေးက ဇောတ်ပွဲတွေ လူတွေရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ပဲ မြန်မာဆန်တာကိုပြမယ်။
Sparkle- တချို့နေရာတွေမှာရွှေရောင် တဖြတ်ဖြတ်တောက်ရမယ်
custom made- DIYလုပ်လို့ရသမျှကိုယ်တိုင်လုပ်မယ် ဆိုအချိန်ပေးခဲ့တယ်။
Yadanarpone- ပုဂံတွေ ရှမ်းပြည်တွေ ပုသိမ်ထီးလိုမျိုးတွေ သိပ်မသုံးပဲရှောင်ခဲ့တယ်။
eclectic -ကနုတ်တွေချည်း၊ မြေအိုးတွေချည်းမသွားချင် လာတဲ့သူမငြီးငွေ့အောင် စပ်ဟပ်ထားပေမယ့် common groundတစ်ခု ချထားပါတယ်။
Project Name: Classic City Tea Saloon, Mandalay.
Design: Novatek, Mandalay.
Job scope: Visual Branding (Interior & Exterior Design)
Construction: Mayor Construction & Maw Kun interior decoration
Status: Completed on June 2018
Photography: Friday Photography, Soulmate Photography, Cai Photography